November 2018 – NepalNote
सबैभन्दा ठूलो विमान ! क्यामेराको लेन्समा अटाउनै गाह्रो (भिडियो)
काठमाडौँ : आकाशमा उड्ने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विमान तत्कालीन अविभाजित सोभियत संघको युक्रेनमा निर्माण गरिएको थियो । द एन्टोनोभ एएन–२२५ म्रिया नामक उक्त मालवाहक विमानको तौल २ लाख ८५ हजार किलोग्राम छ । ८४ मिटर लामो तथा ८८ मिटर लामो पखेटा भएको उक्त विमान आकाशमा
Nov 30, 2018 by nepalnote123 in विज्ञान तथा प्रविधी
बिहिबार यी कार्य नगर्नुहोस , तपाईको लागि फलिफाप साबित बन्नेछ । नत्र पछुताउनुपर्ला सबैको जानकारीको लागि सियर गरौ ! विहीबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । विहीबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल
Nov 29, 2018 by nepalnote123 in ब्लग
एसएलसी सकाएर प्लस २ पढ्ने अनि अष्ट्रेलिया या जापान जाने । अहिले अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुको एइम अर्थात लक्ष्य नै यही बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार यही दुई मुलुकमा सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी गएका छन् । गत वर्षको ११ महिनामा झण्डै
Nov 27, 2018 by nepalnote123 in देश
धर्नामा बसेका निर्मलाका बुवाको मानसिक अवस्था बिग्रिँदै
महेन्द्रनगर । छोरी न्यायको निम्ति अनिश्चितकालिन धर्नामा बसेका निर्मलाका बुवाको मानसिक अवस्था बिग्रिँदै गएको छ । गत २५ कार्तिकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको प्रवेशद्धारमा धर्नामा बसेका निर्मलाका बुवा यज्ञराजको मानसिक अबस्था बिग्रिदै गएको हो । यज्ञराजको स्वास्थ्य अवस्थासंगै मानसिक अवस्था पनि बिग्रिँदै गएको चिकित्सकहरुले बताएका
Nov 24, 2018 by nepalnote123 in देश
काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले दुई हजारभन्दा बढीको संख्यामा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको विज्ञापन गर्ने भएको छ । आयोगले निजामती सेवाअन्तर्गत शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी गरेको हो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण दैनिक मा छ। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार मंसिर २६ गते अधिकृतका लागि विज्ञापन आह्वान गरिने आयोगका
Nov 15, 2018 by nepalnote123 in देश